IChina ihamba phambili kwabahwebelana ne-EU - Bayede News
Ngesikhathi uhwebo phakathi kwamazwe amaningi ne-European Union lungenzi kahle, iChina yona ibonakala ikwazile ukwehluka yize ukhuvethe beludla lubi ngowezi-2020.
IChina ibe ilona lizwe i-EU ehwebelane nalo kakhulu kunamanye emhlabeni, njengoba uhwebo phakathi kwazo lezi zinhlangothi lilinganiselwe ezigidigidini ezingama-586 zamayuro, noma osigidintathu abali-R10.4 ngowezi-2020. Uhwebo phakathi kwe-USA ne-EU lulandele ngemumva njengoba lunganiselwe kosigidintathu abayisi-R9.9.
Yize umnotho waseChina ushonephansi esigabeni sokuqala sowezi-2020 ngenxa yokubhebhetheka kobhubhane ukhuvethe, ukwazile nokho ukukhula ngama-2.3% ngokuqhubeka konyaka ngokulekelelwa ukukhuthala kwabathengi. Phakathi kwezimpahla ezithengwe kakhulu abathengi base-China kubalwa izimoto zase-Europe.
Ngakolunye uhlangothi, izinto ezithengwe kakhulu abathengi base-Europe eChina kube izinto zezempilo kanye nezinto ezisebenza ngogesi. IChina kube ilona lodwa izwe elikhulu elikwazile ukubona umnotho walo ukhula ngonyaka odlule, ngesikhathi amanye amazwe abematasa ezama ukunqanda ukusabalala kokhuvethe.
Ngowezi-2020, iChina kube ilona izwe elihwebelane kakhulu ne-Europe. Lokhu kudalwa ukukhula ngama-5.6% kwempahla ethengwe eChina, kanti leyo edayiselwe iChina ikhule ngama-2.2%, ngokusho kwehhovisi lezibalo le-European Union, i-Eurostat. Izibalo zohwebo ezikhishwe i-Eurostat kuleli sonto azehlukile kakhulu kulezo ezikhishwe iChina ngenyanga edlule.
Izibalo ezikhishwe ngokusemthethweni iChina zikhombe ukuthi uhwebo ne-EU lukhule ngama-5.3% phakathi kowezi-2019 nowezi-2020.
IChina ithe lezi zibalo ezisanda kukhishwa zohwebo ne-Europe zikhombisa ukubaluleka kobudlelwano nokubambisana phakathi kwalezi zinhlangothi zombili. Kusenjalo, kulolu hwebo phakathi kwe-Beijing kanye namazwe ase-Europe, iChina iyona eqhubekayo nokuhlomula kakhulu.
Impahla ethengwa i-Europe eChina ikhuphukile ngonyaka odlule njengoba ngowezi-2019 ikhule isuka kusigidintathu omu-R3 yaya kusigintathu ongu-R3.8 ngowezi-2020.
I-USA ishenxele emumva yeqiwa iChina ngezinga lokuhwebelana ne-EU. Uhwebo ne-United States lwehle kakhulu njengoba impahla ethengwe i-Europe e-USA yehle ngama-13.2% kwathi edayiswe ilesi sifunda yehla ngama-8.2%, ngokusho kwe-Eurostat.
Ngonyaka odlule, izinga lohwebo phakathi kwe-EU ne-USA linganiselwe kusigidintathu oyisi-R9.8 lisuka kusigidintathu oli-R10.9 ngowezi-2019.
Uhwebo phakathi kwe-USA, ngaphansi kwaloyo obenguMengameli uDonald Trump, namazwe ase-Europe kanye neChina lube nokuphazamiseka emva kokuthi la mazwe ekhuphule intela ezimpahleni ezidayiselana yona.
Ithi nyawo ngibelethe iGambia kuCommonwealth
Ngesikhathi uMengameli omusha e-USA uJoe Biden esazinza esikhundleni, izwe laseChina kanye ne-EU baphezu kwezinhlelo zokuqinisa ubudlelwano kwezohwebo nokutshalwa kwezimali.
IChina ne-EU sebesayinde isivumelwano sezokutshalwa kwezimali esizovulela izinkampani zase-Europe intuba enkulu yokungena emakethe enkulukazi yaseChina.
Lesi sivumelwano sizophinde senze kube lula ukuthi izinkampani zaseChina zikwazi ukutshala izimali e-Europe.
Nokho amazwe angama-27 angaphansi kwe-European Union kanye neChina kusalindeleke ukuthi asiphasise ngokusemthethweni lesi sivumelwano ngaphambi kokuthi siqale ukusetshenziswa.
Ngokwezibalo ze-Eurostat, ukuhwebelana ngamandla kagesi kanye namanye amazwe kwehle kakhulu, kwalandela impahla efana nezimoto kanye nemishini kanye neminye imikhiqizo.
nguZanele Buthelezi Feb 19, 2021